Akụkọ - karama, anyị bụ ndị ọkachamara
Iko karama, anyị bụ ndị ọkachamara
Anyị karama nhọrọ nwere ike dabara choro nke America, Australasian, Europe na mba mmanya na ahịa ahịa mmanya. N’akụkụ karama iko anyị, anyị nwere ike ahaziri ọhụụ ọhụrụ maka mmanya, mmụọ na karama mmanya.
Site na akara ngosi ma ọ bụ nke debossed, gaa na mpempe akwụkwọ pụrụ iche, Changyou nwere ike inye gị ọtụtụ ohere iji mepụta karama pụrụ iche maka akara gị. N’ọtụtụ oge, anyị nwere ike itinye akara ngosi akara ngosi, akara ma ọ bụ mbinye aka dị ka ihe embossed ma ọ bụ debossed na ụdị ebu dị adị maka ọnụahịa pere mpe.
Anyị nwere ike inye karama mma mma iji silk ihuenyo ebi akwụkwọ. Ihe ndozi ndị a nwere ike ịdị n'ụdị nchikọta akwụkwọ zuru ezu na karama ahụ, ma ọ bụ n'otu ihu iji ulateomie akara ngosi ọkọlọtọ.
Mepụta karama pụrụ iche gụnyere mmepe nke ebu karama ọhụrụ. Ahịa nke ọhụrụ ebu ịdị iche iche dabere na gị kwa afọ ina na-agba ọsọ size.
Ihe ọ Softụ -ụ na-adịghị mma, biya na karama nri na ROPP, okpu okpu ma ọ bụ nke ejiri gwụchaa bụ nke emebere ma nye iwu ka ọ bụrụ obere ọsọ. Tọlite ​​na ịkpụzi ngwa ọrụ ngwa ngwa bụ ego pere mpe nke ihe ejiri ndị bu mmanya mmanya kwụọ ụgwọ.
Enwere ọtụtụ nhọrọ karama shelf maka mmiri ọ -ụ softụ dị nro, teas, custards, compotes, ihe ọ healthụ -ụ ahụike na biya. Ike anyị bụ ịzụlite, imepụta na ilekọta mmepụta maka nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ na pụrụ iche.
Anyị nwere ike inye karama na ihe kwesịrị ekwesị lids, labeelu ma ọ bụ capping igwe. Mgbe ahụ nwere ike igbu oge gị. Agaghị azụta n'aka ọtụtụ ihe.
Sistemụ arụmọrụ na mkpochapụ nke usoro njikwa njikwa na iko na mkpuchi anyị pụrụ iche na Changyou. Agaghị enye ndị ọzọ na-ebubata ngwugwu otu ụdị ọrụ ahụ.
Anyị bụ naanị ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ QC anyị nwere ugbu a n'oge arụmọrụ niile - ehihie na abalị, ngwụsị izu na ezumike ọha. Nke a pụtara na-agbanwe agbanwe site na pallet ka pallet na ogbe ka ogbe.